टिभिएस बाइक तथा स्कुटर किन्ने हो? यस्तो छ मूल्य :: सुजिता कार्की :: Setopati
टिभिएस बाइक तथा स्कुटर किन्ने हो? यस्तो छ मूल्य
पछिल्लो समय नेपालमा दुई पांग्रे सवारीसाधनको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको छ। विशेषत काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ, विराटनगर जस्तो व्यस्त शहरमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर अत्यावश्यक साधन नै भैसकेको छ।
व्यस्त समय, सवारी जाम, सार्वजनिक यातायातको राम्रो व्यवस्था नहुनु आदिको कारण मोटरसाइकलको लोकप्रियता बढेको जानकारहरू बताउँछन्। मोटरसाइकल तथा स्कुटरको माग बढेसँगै मोटरसाइकल कम्पनीहरूले ग्राहकको आवश्यकता अनुसारका विभिन्न मोडल र मूल्यका मोटरसाइकल तथा स्कुटर उत्पादन गरिरहेका छन्।
पछिल्लो समय आक्रामक व्यापार गरिरहेको टिभिएसको पनि मोटरसाइकल र स्कुटर गरेर १ दर्जनभन्दा धेरै उत्पादन नेपाली बजारमा उपलब्ध छन्।
टिभिएस अहिले नेपालमा चौंथो स्थानमा रहेको र करीब १२ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको कम्पनीका मार्केटिङ म्यानेजर विक्रम पौडेलको दाबी छ।
‘पछिल्ला वर्षमा टिभिएसको सेल्स आक्रमक रुपमा बढेको छ, यसैगरी ग्राहकको विश्वास जित्न सक्यौ भने टिभिएस नेपालकै सर्वाधिक विक्री हुने टु ह्विलर बन्न धेरै समय लाग्दैन’ उनले भने।
‘टिभिएसको गुणस्तरमा त कुनै शंका नै छैन, विगत २ वर्षदेखि हामीले विशेषत सर्भिस र स्पेयर पार्टसमा फोकस गरिरहेका छौँ, यसको लागि हामीले कस्टुमर केयर डिपार्टमेन्ट नै बनाएर प्रत्येक महिना ग्राहकलाई फोन गरेर समस्याको बारेमा बुझ्छौँ’ पौडेलले थपे।
ग्राहको सुविधाको लागि हाल नेपालमा टिभिएसको ८० वटाभन्दा धेरै डिलर रहेको कम्पनीले जनाएको छ। त्यस्तै, टिभिएसका स्पेयर पार्टसको मूल्यको बारेमा भ्रम फिजिएको भन्दै यसको मूल्य निकै कम र उचित रहेको पौडेलको भनाइ छ।
यस्तो छ टिभिएसका स्कुटर र मोटरसाइकलको मूल्य
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २०, २०७४, ०२:२७:३७
‘स्न्यापअन’ ब्राण्डको ग्यारेज उपकरण बजारमा
महिन्द्रा ट्रयाक्टरको उत्सव योजनामा डेढ लाखसम्मको पुरस्कार
बुटवलमा एसी भएका सिटी बस संचालन
टिभिएसले खोल्यो १० नयाँ शोरुम
दशैंका लागि राजधानीबाट घर जान असोज ५ गतेबाट बुकिङ खुल्ला
६५ हजारले हेरे नाडा अटो शो